Wasiir dowlihii madaxtooyada Puntland oo is-casilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiir dowlihii madaxtooyada Puntland oo is-casilay
October 1, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada Puntland Maxamed Cabaas Macalim. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garowe-(Puntland Mirror) Wasiir dowlihii madaxtooyada dowlada Puntland Maxamed Cabaas Macalim ayaa is-casilay shalay oo Jimce ahayd, isagoo sheegay arrimo isaga u gaar ah in uu isku-casilay.
Maxamed Cabaas oo tan iyo 2014-kii kamid ahaa golaha wasiirada Puntland, ayaa sheegay in madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali uu si rasmiya uga aqbalay is-casilaadiisa.
Is-casilaada Cabaas ayaa imaanaysa ku dhawaad shan maalmood kadib, markii wasiirkii hore ee warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade uu iska-casilay booskiisii, arrimo isaga u gaar ah.
August 13, 2016 Ciidamada amaanka Puntland ee PSF oo ugu yaraan 10 looga shaki qabo al-Shabaab ku qabtay Gaalkacyo
Puntland’s state minister for presidential place resigns
Somali armed forces will launch operations against Al-Shabaab militants
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s armed forces commander General Abdullahi Ali Anod said the forces will launch an operation against Al-Shabab militants in southern Somalia. “The most important activities are to carry out operations against Al-Shabab terror [...]
Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay miisaaniyadda 2021
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2021, sida uu sheegay Wasiirka Maaliyada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Miisaaniyadda 2021, taasoo ay xildhibaanadu ansixiyeen, ayaa lagu qiyaasayaa $671.8 milyan, [...]